Dubai City Company kubatsira expats kuti uwane mabasa mu Dubai
Dubai City Kambani inobatsira expats!
Boka redu revanyanzvi rinonyatsokupa ruzivo rwekutsvaga basa maitiro. Zvakanakisa zvekushandisa kwevashandi vekunze. Sezvineiwo, Dubai City Company yakabatsira vashandi vekunze vekunze. Lets yakatarisana nekukwanisa kusvika kwemakambani zviuru makumi maviri kuMiddle East. Yedu yekutsvaga nyanzvi yekutarisira chibvumirano nevashandi muUnited Arab Emirates. Isu tiri mienzaniso yakanaka yebasa redu revashandi mu Middle East. Nharembozha yedu iri kuvhenekerwa pasi rose. Kubva kumatunhu akadai seQatar, Saudi Arabia, Bahrain, Rebhanoni, pamwe chete neKuwait uye Egypt. Nese enzvimbo idzi, vashandi vekunze vanokwanisa kuhaya.
Vanodaidzira mari vachakwanisa kuwana basa nekutumira mbiri online. Inofanirwa kurangarirwa kuti isu, kwete kungotungamira vashandi vekunze. Dubai City Kambani inoisa muviri vashandi vekunze kubva kunze kwenyika. Vashandi veIndia, maodzanyemba eAfrica nevarapi vePakistan ndakawana basa nekushandisa yedu yakasununguka system. Kune rimwe divi, isu tiri kubatsira nekutsvaga kuti ndiani arikushanda nechepakati kumabvazuva. Nekuda kwechikwata chedu kuzivisa mumiriri muUnited Arab Emirates. Kuti uve nechokwadi chekuti mamaneja nevatsva vachangopedza basa vakawana basa chairo.
Iyo 100% Mahara kubatana!
Vanotsvaga vanotsvaga vanowana ruzivo rwakakosheswa. Muchidimbu vane tarisa pazasi uye tarisa edu matsva vanobatana / nyowani expats. Dubai City Kambani inoita kuti iwanikwe zvakare kune HR maneja. Ivo vanorega kubva kupasi rese kuenda kuAU, Qatar, Saudi Arabia, US, Europe neCanada. MaPhilippines, maIndia, maAmerican, vaArabhu vanotaura basa vanoshandisa zvakare masevhisi edu kubudirira kusimudzira muDubai. Uine izvi mupfungwa, chero mutungamiriri anokwanisa kuwana basa neDubai City Company. Chaizvoizvo isu tichagona kukubatsira iwe. Iwe unowedzera mukana wekutsvaga vashandirwi pamwe nemaneja ekuvhiya muDubai. Kuwana kukosha kuburikidza nekushandisa yedu kambani masevhisi. Kune rimwe divi, tinobatana neHurumende zvirevo. Kambani yeguta reDubai ipfungwa inokosha. Kunyanya kune vanotsvaga basa kunze kwenyika.
Goverana Nyaya Yako Yekubudirira
Nguva yasara kuenda kuNyika Expo 2020 ku Dubai
Nguva kusvika Chipiri, 20 Gumiguru 2020, 12: 00: 00 (Dubai nguva)
Ingangobatana neDubai City Company
Job Vacancies Mu Dubai
Kutsvaga Fresher Mabasa muDubai? Tsvaga uye shandisa iyo ichangoburwa Mabasa muDubai & padhuze neDubai kune zvese zvinodiwa. 1000+ mabasa anowanikwa muDubai, UAE pane i12wrk.com. Accountant, vatengesi vanoita, masoftware software, Mutengi Tsigiro Mumiririri, Receptist, Mufambisi nezvimwe! EAE inotungamira yekutsvaga basa app uye saiti uchishandisa google mamepu kutsvaga kwechokwadi uye kwakagadziriswa mabasa mudunhu. Kana iwe uri mukwikwidzi anoshuvira kutsvaga-yakazara-kana chikamu chenguva-yebasa mikana kana uine zororo rekuzadza, pedza kutsvaga kwako munzira inonyanya kushanda pa i12WRK. Nyorera Zvino PaInternet: https://i12wrk.com Nyorera Vhiya apple App: https://apps.apple.com/us/app/i12wrk/id1320833147?ls=1 Nyora Via Android App: https://play.google. com / chitoro / zvirimo / zvinyorwa? id = com.i12wrk.i12wrkphone & hl = en Tarisa zvimwe zvakawanda: https: //www.facebook.com/i12wrk/
Ndakaita bhururu yangu Highschool kuGermany uye ndanga ndichishanda muCanada kwemwedzi mitatu manje uye ndoda kuenda ku Abu Dhabi kunoshanda ikoko.
heseri mukuru - Al Borg Medical Laboratories Co
Kuchengeta sitoko muNzvimbo Chitoro kusingapfuure huwandu hwakabvumidzwa pasi peiyo restocking level.
· Kwakakodzera kuburitswa kwechinhu kuchipihwa kwega kwakakosha chikumbiro chakanangana nezve chaiyo yekushandisa.
· Kuongorora kushandiswa kwekufamba, void was was & & freeze inventory.
· Kubatanidzwa pamwe nekuchengetwa kwakanyanya kwekuzadza chitoro nenguva sekushandisa senge yekuzadzisa chirongwa.
· Kudzora & kuongorora chinhu kufamba pamwe nekupera.
Kuita nguva yekutarisa nekuverenga nemuviri pamwe nekufananidza neyechokwadi hesitori muhurongwa
Yakatumirwa Zuva: 2020-01-07
Nzvimbo yeJobho: Eastern Province, Saudi Arabia
Basa Rekuita: Kutenga uye Kutenga
Kambani indasitiri: Laborator & Hunhu Kudzora
Basa Rekuita: Mid Career
Wezvemamiriro ekunze - Beresford Wilson & Partners
Vatengi vedu mutungamiriri anotungamira Wekutangisa Kudyidzana uye vari kutsvaga anowana Wezvemamiriro ekunze ehofisi yavo muQatar.
Iwe uchave nebasa
Kubatsira nekutungamira kwenzvimbo, kubatana, kuongorora uye kuongorora
Kubika pane dzakasiyana siyana nharaunda nekuchengeteka zvinhu
Natural Science kana Engineering Management dhigirii
Minimum makore masere 'ruzivo mune yakakodzera munda
Inofanirwa kuve ikozvino yakavakirwa muQatar
Inofanirwa kuve inokwanisa kuwana NOC
Nzvimbo yeJobho: Doha, Qatar
Basa Rekuita: Quality Control
Kambani indasitiri: Kuvaka & Kuvaka
Mwedzi Wemwedzi US $ 2,000